माधव स’मुहमाथी ओली झनै आ’क्रमक! रावल भन्छन ना’लायक रा’ष्टघाती हुन ओली (भिडियो सहित):: Mero Desh
माधव स’मुहमाथी ओली झनै आ’क्रमक! रावल भन्छन ना’लायक रा’ष्टघाती हुन ओली (भिडियो सहित)
Published on: २० चैत्र २०७७, शुक्रबार ०६:३२
काठमाडाैँ । भिडियो समचारको अन्तमा राखिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहप्रति आ’क्रमकरूपमा अगाडि बढेका छन् ।”पार्टी नीतिविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै लिखित स्पष्टीकरण सोध्दै नेपाल स’मूहमाथि।
धमाधम कारबाहीको प्रक्रिया शुरु गरेका छन् । वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष ,भीम रावलमाथि’ कारबाही गरेको तीन दिनपछि पु’नलिखित स्प’ष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभए को भन्दै। अध्यक्ष ओलीले नेताद्वय घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई पनि पार्टीबाट निलम्बन गरेका छन्।यसअघि ओलीले माधवकुमार नेपाल र भीम रावललाई।
उनका अनुसार पार्टी नीतिविपरीत गतिविधि गर्ने नेताहरुमाथि पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । ती नेताले भने– ‘पार्टी अब अलमलमा पर्दैन, पार्टीभित्र गलत काम गर्नेमाथि धमाधम का’रबाही शुरु हुन्छ ।नेपाल पक्षले भने ओलीले, गरेको का’र बाही बाट न’डराउने बताउँदै देशभर समानान्तर कमिटी गठनलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय कार्यकर्ताको भेला गरिसकेको नेपाल समूहले २०७५ जेठ ३ गते अघि नै कमिटीलाई ब्यूँताउने अभियान नै चलाएको छ ।”नेपाल समूहका नेता ठाकु,र गैरेले” “अध्यक्ष ,ओलीको का’रबाहीको ध/म्की/बाट न’डराउने बताउँदै देशव्यापी राष्ट्रिय अभियान लिएर जाने बताए” ।
उनले भने– ‘ओली प्रवृत्तिको स्वेच्छाचारी र अवसरवा दको वि’रुद्ध राष्ट्रिय अभियान लिएर जान्छौँ ।’ याे खबर आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा छ ।”यो पनि काठमाडौं। काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मंगलबार भेट भएको छ।
“सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु पर्ने नै”तिक दबाब मा रहेका दाहालले सत्ता समी करणका लागि छलफल गर्न देउवासँग भेटेका हुन्।”देउवासँगको भेटमा दाहालले पुरानै प्रस्ताव दोहोर्याएका थिए। साथै उनले ओलीको विकल्पमा देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रस्ताव राखेको देउवा निकट एक नेताले बताए”।
ती नेताका अनुसार “दाहालले देउवालाई सरकार गठनका लागि पहलकदमी लिन पनि आ”ग्रह गरेका, थिए।तपाईं प्रधानमन्त्री, बन्नुस्। यसका लागि अब पहलकदमी लिनुस्,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै काँग्रेस नेताले फेरि भने,ओली सरकारको निरन्तरता लोकतन्त्र र संविधानका लागि खतरा पूर्ण छ।
अब काँग्रेस, जसपा र माओवादी केन्द्र मिलेर अघि बढ्नु पर्छ ।’काँग्रेसमा पनि देउवाले सरकारले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्नेमा एकमत छ। देउवा भने अझै तयार देखिँदैनन्।उनले दाहाल लाई अझै परिस्थिति परिपक्व नबनिसकेको जवाफ दिए। देउवाले दाहाललाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन आग्रह गरे।”
“बहुमतको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु अपरिपक्व कदम हुने देउवाको बुझाइ छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ।